ဆေးဝါးမပါဘဲ လေးလကျော်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၅၀ လျှော့ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးမြတ်သူ - Myanmar Express
May 14, 2018 By Myanmar Express in ဗဟုသုတ, အားကစား, အတွေးအမြင်, ဆောင်းပါး No Comments Tags: ဝိတ်ချ, ဦးမြတ်သူ
မြတ်နိုးသူ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ၄၃နှစ်အရွယ် ဦးမြတ်သူသည် အဝလွန်ခြင်းအတွက် ယခင်က ရေတိုဝိတ်လျှော့နည်းများကိုသုံးပြီး ဝိတ်လျှော့ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။
“အရင်တုန်းက သုံးခေါက်လောက် ဝိတ်လျှော့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝိတ်ကျတာ မသိသာဘူး၊ စိတ်ကလည်း အရမ်းပင်ပန်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသီးတွေပဲစားပြီး ထမင်းလုံးဝ မစားနဲ့ဆိုတာမျိုး၊ လေ့ကျင့်ခန်း အပြင်းအထန်လုပ်ဆိုတာမျိုး ဆိုတော့ ခဏပဲလုပ်နိုင်တယ်၊ ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုမှ မလုပ်နိုင်တော့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၀ ရက်လောက်လည်း လုပ်ပြီးရော အစားဖြတ်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘဲ စိတ်အလိုမကျတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်း ဝိတ်လျှော့ရတာကို စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ဝိတ်ကျအောင် ဆေးတွေလည်းသောက်ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစားအသောက် မထိန်းတော့ ပြန်ဝတာပါပဲ” ဟု ဦးမြတ်သူက ပြောသည်။
လေးဖက်နာရောဂါကြောင့် အိပ်ရာထဲ ခြောက်လလောက် လှဲနေရသည်အထိ ဆိုးရွားစွာ ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသော ဦးမြတ်သူသည် ထိုကာလအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်များစွာ မြင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၈၇ ပေါင်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ “ကိုယ်အလေးချိန် ဒီလောက်အထိ တက်ခဲ့ရတာက ကျန်းမာရေးအသိကို တိတိကျကျ မသိခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီတော့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံက မှားနေခဲ့ပါတယ်။ အဝလွန်တော့ ရောဂါတွေဖြစ်လိုက်၊ ဆေးခန်းပြလိုက် လည်နေခဲ့တာပါ။
အရင်က ဘယ်လို စားသောက်ခဲ့သလဲဆိုတော့ ထမင်းကတော့ နည်းနည်းပဲ စားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မြန်စားတယ်၊ အာလူးကြော်၊ ဟမ်ဘာဂါ၊ ပီဇာ စတဲ့ သရေစာတွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အပြင်စာကလည်း အင်မတန်စားတယ်၊ အချဉ်၊ အခါးတွေကို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ အသားပဲ ဟင်းထင်တာ၊ အရွက်စိမ်းတွေဆို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ သရေစာကတော့ မျက်လုံးမှိတ်မှပဲ ပါးစပ်ပိတ်တော့တယ်။ ကျွန်တော်က ထမင်းကိုနည်းနည်းပဲ စားတော့ ‘ငါ ဝတာ ဝတယ်၊ နည်းနည်းပဲစားပြီး ဝနေတာဆိုတော့ မတတ်နိုင်ဘူး’လို့ ထင်ခဲ့တယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၂၈၇ပေါင်အထိဖြစ်သွားတဲ့ အခါမှာ ကျန်းမာရေးကချူခြာလာပါတယ်၊ အသက် ရှူရတာလည်း မဝတော့ဘူး၊အဲဒါနဲ့ နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာဦးသန်းထိုက်အောင်ဆီ သွားပြတော့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး အာဟာရဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ စိတ်ပင်ပန်းတာ သိပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အစားအသောက်ကို စနစ်နဲ့ စားတတ်သွားလို့ပါ။ အစားအသောက်ဆိုလည်း ဘယ်အရာက ကယ်လိုရီများတယ်၊ ဘယ်အရာဆိုရင် စားသင့်တယ်ဆိုတာ သိသွားတယ်။ ဆရာမ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်က လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ စခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပျက်မသွားပါဘူး”ဟု ဦးမြတ်သူက ပြောသည်။
ဦးမြတ်သူသည် ၁-၄-၂၀၁၆ ရက်နေ့ကစပြီး ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချမှုကို တိကျစွာပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ၂၄၃ ပေါင်၊ ၁၉-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ၂၃၇ ပေါင် အထိ လျော့ကျသွားခဲ့ရာ တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ၁၀ ပေါင်ကျော် လျော့ကျခဲ့ပြီး လေးလကျော်အတွင်း ပေါင် ၅၀ အထိ လျော့ကျသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်က တစ်လမှာ ၁၅ ပေါင်လောက် ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က အစားအသောက်မက်တော့ ညစာကို အမြဲတမ်းမဆင်ခြင်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် နှစ်ရက် တစ်ပေါင်လောက် မကျတော့ပါဘူး။ စစချင်း ၁၀ ရက်-၁၅ ရက်လောက်အတွင်းမှာတော့ နည်းစနစ်တကျ မစားသောက်တတ်သေးတဲ့အတွက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ စနစ်တကျ နေထိုင်စားသောက်တတ်လာတဲ့အတွက် အတော်လေး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဝိတ်တကယ်ကျတဲ့အတွက် လူကလည်း နေရထိုင်ရတာပေါ့ပါးလာတယ်။ အပြင်စာကို လုံးဝနီးပါးမစားတော့ပါဘူး။ ငြင်းလို့မရတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ စားရင်တောင် အရင်က အသားပဲရွေးစားပေမယ့် အခုကျတော့ အသီးအရွက်တွေကို ဦးစားပေးစားတယ်” ဟု ဦးမြတ်သူက သူ၏ စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောပြခဲ့သည်။
“အရင်က အစာစားရင် မဝါးဘူး၊ မျိုချတာဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ ကုန်သွားတယ်။ အခုကျတော့ ဆရာမက နာရီဝက်ကြာအောင်စားလို့ ပြောပေမယ့် ၁၅မိနစ် အနည်းဆုံးကြာအောင် စားတယ်၊ ဟင်းချိုကို အရင်ဆုံးစားတဲ့အကျင့်လုပ်တယ်၊ ထမင်းတစ် လုတ်စားပြီးတိုင်း ၁ကနေ ၃၀ အထိရေတယ်။ အဓိကက အစာကို ကြေညက်အောင် အချိန်ယူစားပါတယ်။ တစ်နေကုန်မှာလည်း ငါးမုန့်ကြော်၊ အာလူးကြော်၊ စမူဆာ စတဲ့ ဆီကြော်မုန့်တွေ အကုန်ရှောင်ပါတယ်။ အရင်က အချိုရည်ကို ကြိုက်လည်း ကြိုက်တော့ တစ်နေ့ကို နှစ်ဘူး-သုံးဘူးလောက်သောက်ပါတယ်။
အခုတော့အဆိပ်လို့ သဘောထားပြီး လုံးဝကို လှည့်မကြည့်တော့ပါဘူး။ ရေနဲ့ ရေနွေးကြမ်းကိုပဲသောက် တော့တယ်။ ဘီယာ၊ အရက်ကလည်း မသောက်တာ နှစ် ၂၀ လောက်ရှိသွားပါပြီ။ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီတောင် မသောက်တော့ဘူး။ အပြင်စာကို သိပ်မစား တော့ဘူး။ အခုဆိုရင် ရေနွေးကြမ်းကို ခါးခါးလေး သောက်တယ်။ ဆရာမက ဘယ်အစာက ကယ်လိုရီများတယ်၊ မစားသင့်တဲ့ အထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီး ကယ်လိုရီတက်တဲ့ အစာ၊ ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစာတွေကို သိအောင် ပြောပြပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ နည်း နည်းစားပေမယ့် ဘယ်အစာဆိုရင် ကယ်လိုရီတက် နိုင်တယ်၊ ဘယ်အစာဆိုရင် များများစားလည်း ကယ်လိုရီမတက်ဘူးဆိုတာ ခွဲခြားသိသွားပါတယ်”ဟု ဦး မြတ်သူက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က သွေးတိုးခြင်း၊ ဆီးချို ရောဂါအကြိုအဆင့် ဖြစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ သွေးတွင်းအဆီများခြင်းနှင့် လေးဖက်နာဝေဒနာတို့ ခံစားခဲ့ရသော်လည်း ယခု ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၅၀ ကျပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ထိုဝေဒနာများ သိသာစွာ လျော့ပါးသက်သာသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မလိုအပ်တဲ့ အပိုဝန် ပေါင် ၅၀ လောက် လျော့သွားတဲ့အခါ လူကလည်းပေါ့ပါးသွားတယ်။ အရင်ကဆို ကြာကြာ တောင်မတ်တတ်မရပ်နိုင်ဘူး။ လမ်းလျှောက်ရမှာကို ကြောက်နေခဲ့တာ။ အခုကျတော့ လမ်းလျှောက်ရတာကို အားကစားတစ်ခုလို မဟုတ်ဘဲ ကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ လျှောက်ကိုလျှောက်ချင်နေတာ. . .
“မလိုအပ်တဲ့ အပိုဝန် ပေါင် ၅၀ လောက်လျော့သွားတဲ့အခါ လူကလည်း ပေါ့ပါးသွားတယ်။ အရင်ကဆို ကြာကြာတောင် မတ်တတ်မရပ်နိုင်ဘူး။ လမ်းလျှောက်ရမှာကို ကြောက်နေခဲ့တာ။ အခုကျတော့ လမ်းလျှောက်ရတာကို အားကစားတစ်ခုလို မဟုတ်ဘဲ ကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ လျှောက်ကို လျှောက်ချင်နေတာ။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ ဝိတ်လျှော့ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်”ဟု ဦးမြတ်သူကဆိုသည်။
“ဆရာမက လေ့ကျင့်ခန်းကို စိတ်ပျော်လာအောင် အရင်လုပ်ဆိုပြီး တစ်ရက်ကို တစ်နာရီခွဲပဲ လမ်းလျှောက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒါတောင် ဆက်တိုက် မလျှောက်ခိုင်းပါဘူး။ ၁၅ မိနစ်လျှောက်ပြီး နား၊ ပြီးမှ ၁၅ မိနစ်လျှောက် . . တစ်နေကုန်မှာ တစ်နာရီခွဲပြည့်ရင် တော်ပြီလို့ ပြောခဲ့တယ်။ စစချင်းတုန်းက တစ်နာရီခွဲ ပြည့်အောင် လျှောက်နိုင်ဖို့ တော်တော်အား ထုတ်ခဲ့ရတယ်။ အခုကျတော့ တစ်နေ့ကို နှစ်နာရီခွဲတောင် လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရေလည်း ကူးပါတယ်။ အရင်က လမ်းလျှောက်ရင်တောင် အိပ်ချင် မူးတူးလျှောက်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ လက်တွေလွှဲယမ်းပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ချွေးထွက်တဲ့အထိ လျှောက်ပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရင် နေရတာ လန်းဆန်းတယ်၊ နာတဲ့ဒဏ်လည်း မခံစားရတော့ပါဘူး”ဟု ဦးမြတ်သူက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် ရရှိသည့် ကောင်းကျိုးကို မျှဝေခဲ့သည်။
ဦးမြတ်သူဝိတ်လျှော့နိုင်ခဲ့ခြင်း၏ အဓိက တွန်းအားမှာ ဇနီးသည်၏ အားပေးမှုဟု သူကဆိုသည်။
“အဓိက ဝိတ်ချဖြစ်တဲ့ တွန်းအား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးကြောင့်ပါပဲ။ သူက ကျွန်တော့်ကို အသက်ရှည်ကျန်းမာစေချင်တယ်၊ လှလည်း လှစေချင်တယ်။ ဝတဲ့အခါ ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့မှ မတော်တော့ဘူး။ အဆင်ဘယ်လောက်လှလှ ဝတ်လို့မရတော့ဘဲ တော်တာဝယ်ဝတ်ရတဲ့ဘ၀ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂေါ့ဖ်ရိုက်ရင်တောင် သူများတွေလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မသွားလာနိုင်တဲ့ ဘဝမျိုးဖြစ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာပါ နောက်မှာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးက အစားအသောက်တွေကို ဆရာမရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ ဟင်းရည်ဆိုလည်း မထပ်အောင် စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ပေးတယ်။
ကိုယ့်လို ကျန်းမာရေးအသိမရှိတာမျိုး မဖြစ်အောင် သားကိုလည်း ဆရာမဆီ ခေါ်သွားတိုင်း ကျန်းမာရေးအသိရှိလာအောင် သင်ပေးထားတယ်။ အဲဒီအတွက် သားကလည်း အသီးအရွက်တွေ စားတတ်တဲ့အကျင့်ရလာပါပြီ”ဟု ဦးမြတ်သူကပြောသည်။ အရပ် ၅ ပေ ၇ လက်မရှိသော ဦးမြတ်သူအတွက်ရှိသင့်သည့် ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်သည် ၁၄၀ ပေါင်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သော်လည်း နောင် ၆ လအတွင်း ၁၉၀-၂၀၀ ပေါင်ကြားရှိသည်အထိ လျှော့ချသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ပေါင် ၂၀၀ မကျော်အောင် အမြဲထိန်းထားမည်ဟု ဦးမြတ်သူကဆိုသည်။
အဝလွန်ခြင်း၊ ဝခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများအတွက် –
“အသက်လည်းရှည်ချင်တယ်၊ ကျန်းကျန်းမာမာလည်း နေချင်တယ်၊ စတိုင်ကျပြီး စမတ်လည်း ကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝနေတာက ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် မကောင်းပါဘူး။ မိသားစုဘက်က ကြည့်လည်း မကောင်းဘူး။ လူမှုရေးဘက်ကကြည့်လည်း မကောင်းဘူး၊ စီးပွားရေးဘက်ကကြည့်လည်း မကောင်းဘူး။ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ မိသားစုမှာလည်း ထိခိုက်သလို စီးပွားရေး၊ လူမှုဆက်ဆံပေါင်းသင်းရေးမှာလည်း ထိခိုက်ပါတယ်။ အဘက်ဘက်မှာ ဆုံးရှုံးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဝလွန်သူတွေကော ဝတဲ့သူတွေပါ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ နေထိုင်စားသောက်ပြီး ဝိတ်လျှော့သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီအဝလွန်တာကြောင့် ရှစ်လ-ကိုးလလောက် အိပ်ရာထဲက မထနိုင်လောက်အောင် နာဖူးခဲ့ပြီးပြီ။ အခု ပေါင် ၅၀ လောက် ကျပြီးချိန်မှာ ကျန်းမာရေးကလည်း ပုံမှန်ကောင်းလာတယ်၊ မိသားစုကလည်း ပျော်ရွှင်မှုရလာတယ်၊ စီးပွားရေးမှာလည်း လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ စိတ်စွမ်းအား ရှိလာတယ်၊ အဲဒီအတွက် ဘယ်လို ဖိအားဒဏ်တွေပဲလာလာ ခံနိုင်ရည် ပိုရှိလာပါတယ်။ အစစအရာရာ ပိုမို အဆင်ပြေလာတာကိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။
တစ်လ ဝိတ်လျှော့ဖို့ နောက်ကျရင် ၁၀ ပေါင် ကျရမယ့်အစား မဆင်ခြင်ဘဲနေလို့ ၁၀ ပေါင် ထပ်တက်လာတဲ့အတွက် ပေါင် ၂၀ နစ်နာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချက်ချင်းပဲဝိတ်လျှော့ပါလို့ စေတနာနဲ့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်”ဟု ဦးမြတ်သူက အကြံပေးစကား ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
မွတျနိုးသူ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျး၏ မနျနေးဂငျြးဒါရိုကျတာဖွဈသူ ၄၃နှဈအရှယျ ဦးမွတျသူသညျ အဝလှနျခွငျးအတှကျ ယခငျက ရတေိုဝိတျလြှော့နညျးမြားကိုသုံးပွီး ဝိတျလြှော့ခဲ့ဖူးသူဖွဈသညျ။
“အရငျတုနျးက သုံးခေါကျလောကျ ဝိတျလြှော့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဝိတျကတြာ မသိသာဘူး၊ စိတျကလညျး အရမျးပငျပနျးတယျ၊ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အသီးတှပေဲစားပွီး ထမငျးလုံးဝ မစားနဲ့ဆိုတာမြိုး၊ လကေ့ငျြ့ခနျး အပွငျးအထနျလုပျဆိုတာမြိုး ဆိုတော့ ခဏပဲလုပျနိုငျတယျ၊ ရရှေညျမှာ ဘယျလိုမှ မလုပျနိုငျတော့ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ ၁၀ ရကျလောကျလညျး လုပျပွီးရော အစားဖွတျတဲ့ဒဏျကို မခံနိုငျတော့ဘဲ စိတျအလိုမကတြာတှဖွေဈလာပါတယျ။ အဲဒီတော့ နောကျပိုငျး ဝိတျလြှော့ရတာကို စိတျပကျြသှားတယျ။ ဝိတျကအြောငျ ဆေးတှလေညျးသောကျဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အစားအသောကျ မထိနျးတော့ ပွနျဝတာပါပဲ” ဟု ဦးမွတျသူက ပွောသညျ။
လေးဖကျနာရောဂါကွောငျ့ အိပျရာထဲ ခွောကျလလောကျ လှဲနရေသညျအထိ ဆိုးရှားစှာ ဝဒေနာခံစားခဲ့ရသော ဦးမွတျသူသညျ ထိုကာလအတှငျး ကိုယျအလေးခြိနျမြားစှာ မွငျ့တကျလာခဲ့ရာ ၂၈၇ ပေါငျအထိ ဖွဈသှားခဲ့သညျ။ “ကိုယျအလေးခြိနျ ဒီလောကျအထိ တကျခဲ့ရတာက ကနျြးမာရေးအသိကို တိတိကကြ မသိခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီတော့ စားသောကျနထေိုငျမှုပုံစံက မှားနခေဲ့ပါတယျ။ အဝလှနျတော့ ရောဂါတှဖွေဈလိုကျ၊ ဆေးခနျးပွလိုကျ လညျနခေဲ့တာပါ။
အရငျက ဘယျလို စားသောကျခဲ့သလဲဆိုတော့ ထမငျးကတော့ နညျးနညျးပဲ စားပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ မွနျမွနျစားတယျ၊ အာလူးကွျော၊ ဟမျဘာဂါ၊ ပီဇာ စတဲ့ သရစောတှကေို အရမျးကွိုကျပါတယျ။ အပွငျစာကလညျး အငျမတနျစားတယျ၊ အခဉျြ၊ အခါးတှကေို လုံးဝမကွိုကျဘူး။ အသားပဲ ဟငျးထငျတာ၊ အရှကျစိမျးတှဆေို လုံးဝမကွိုကျဘူး။ သရစောကတော့ မကျြလုံးမှိတျမှပဲ ပါးစပျပိတျတော့တယျ။ ကြှနျတျောက ထမငျးကိုနညျးနညျးပဲ စားတော့ ‘ငါ ဝတာ ဝတယျ၊ နညျးနညျးပဲစားပွီး ဝနတောဆိုတော့ မတတျနိုငျဘူး’လို့ ထငျခဲ့တယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျ ၂၈၇ပေါငျအထိဖွဈသှားတဲ့ အခါမှာ ကနျြးမာရေးကခြူခွာလာပါတယျ၊ အသကျ ရှူရတာလညျး မဝတော့ဘူး၊အဲဒါနဲ့ နှလုံးအထူးကု ဆရာဝနျ ဒေါကျတာဦးသနျးထိုကျအောငျဆီ သှားပွတော့ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ဖို့ လိုတယျဆိုပွီး အာဟာရဆိုငျရာ ဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာဒျေါဝငျးဝငျးမွငျ့နဲ့ မိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။
အခုတဈခေါကျမှာတော့ စိတျပငျပနျးတာ သိပျမဖွဈခဲ့ဘူး။ အစားအသောကျကို စနဈနဲ့ စားတတျသှားလို့ပါ။ အစားအသောကျဆိုလညျး ဘယျအရာက ကယျလိုရီမြားတယျ၊ ဘယျအရာဆိုရငျ စားသငျ့တယျဆိုတာ သိသှားတယျ။ ဆရာမ ဒျေါဝငျးဝငျးမွငျ့က လကေ့ငျြ့ခနျးကိုလုပျပါ၊ ဒါပမေဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးပဲ စခိုငျးပါတယျ။ အဲဒီတော့ ကိုယျလုပျနိုငျတဲ့ အတိုငျးအတာအတှငျး ဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျပကျြမသှားပါဘူး”ဟု ဦးမွတျသူက ပွောသညျ။
ဦးမွတျသူသညျ ၁-၄-၂၀၁၆ ရကျနကေ့စပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခမြှုကို တိကစြှာပွုလုပျခဲ့ရာ ၁-၈-၂၀၁၆ ရကျနတှေ့ငျ ၂၄၃ ပေါငျ၊ ၁၉-၈-၂၀၁၆ ရကျနတှေ့ငျ ၂၃၇ ပေါငျ အထိ လြော့ကသြှားခဲ့ရာ တဈလလြှငျ ပမျြးမြှ ၁၀ ပေါငျကြျော လြော့ကခြဲ့ပွီး လေးလကြျောအတှငျး ပေါငျ ၅၀ အထိ လြော့ကသြှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“တကယျလုပျမယျဆိုရငျ ကိုယျအလေးခြိနျက တဈလမှာ ၁၅ ပေါငျလောကျ ကနြိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောက အစားအသောကျမကျတော့ ညစာကို အမွဲတမျးမဆငျခွငျဖွဈပါဘူး။ အဲဒီအတှကျ နှဈရကျ တဈပေါငျလောကျ မကတြော့ပါဘူး။ စစခငျြး ၁၀ ရကျ-၁၅ ရကျလောကျအတှငျးမှာတော့ နညျးစနဈတကြ မစားသောကျတတျသေးတဲ့အတှကျ ဒုက်ခရောကျခဲ့တယျ။ နောကျပိုငျးကတြော့ စနဈတကြ နထေိုငျစားသောကျတတျလာတဲ့အတှကျ အတျောလေး အဆငျပွသှေားပါတယျ။ ဝိတျတကယျကတြဲ့အတှကျ လူကလညျး နရေထိုငျရတာပေါ့ပါးလာတယျ။ အပွငျစာကို လုံးဝနီးပါးမစားတော့ပါဘူး။ ငွငျးလို့မရတဲ့ ပှဲလမျးသဘငျတှမှော စားရငျတောငျ အရငျက အသားပဲရှေးစားပမေယျ့ အခုကတြော့ အသီးအရှကျတှကေို ဦးစားပေးစားတယျ” ဟု ဦးမွတျသူက သူ၏ စားသောကျမှုပုံစံကို ပွောပွခဲ့သညျ။
“အရငျက အစာစားရငျ မဝါးဘူး၊ မြိုခတြာဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ ကုနျသှားတယျ။ အခုကတြော့ ဆရာမက နာရီဝကျကွာအောငျစားလို့ ပွောပမေယျ့ ၁၅မိနဈ အနညျးဆုံးကွာအောငျ စားတယျ၊ ဟငျးခြိုကို အရငျဆုံးစားတဲ့အကငျြ့လုပျတယျ၊ ထမငျးတဈ လုတျစားပွီးတိုငျး ၁ကနေ ၃၀ အထိရတေယျ။ အဓိကက အစာကို ကွညေကျအောငျ အခြိနျယူစားပါတယျ။ တဈနကေုနျမှာလညျး ငါးမုနျ့ကွျော၊ အာလူးကွျော၊ စမူဆာ စတဲ့ ဆီကွျောမုနျ့တှေ အကုနျရှောငျပါတယျ။ အရငျက အခြိုရညျကို ကွိုကျလညျး ကွိုကျတော့ တဈနကေို့ နှဈဘူး-သုံးဘူးလောကျသောကျပါတယျ။
အခုတော့အဆိပျလို့ သဘောထားပွီး လုံးဝကို လှညျ့မကွညျ့တော့ပါဘူး။ ရနေဲ့ ရနှေေးကွမျးကိုပဲသောကျ တော့တယျ။ ဘီယာ၊ အရကျကလညျး မသောကျတာ နှဈ ၂၀ လောကျရှိသှားပါပွီ။ လကျဖကျရညျ၊ ကျောဖီတောငျ မသောကျတော့ဘူး။ အပွငျစာကို သိပျမစား တော့ဘူး။ အခုဆိုရငျ ရနှေေးကွမျးကို ခါးခါးလေး သောကျတယျ။ ဆရာမက ဘယျအစာက ကယျလိုရီမြားတယျ၊ မစားသငျ့တဲ့ အထဲမှာပါတယျဆိုပွီး ကယျလိုရီတကျတဲ့ အစာ၊ ကယျလိုရီနညျးတဲ့ အစာတှကေို သိအောငျ ပွောပွပေးလိုကျတယျ။ အဲဒီအခါမှာ နညျး နညျးစားပမေယျ့ ဘယျအစာဆိုရငျ ကယျလိုရီတကျ နိုငျတယျ၊ ဘယျအစာဆိုရငျ မြားမြားစားလညျး ကယျလိုရီမတကျဘူးဆိုတာ ခှဲခွားသိသှားပါတယျ”ဟု ဦး မွတျသူက ပွောသညျ။
လှနျခဲ့သော သုံးနှဈက သှေးတိုးခွငျး၊ ဆီးခြို ရောဂါအကွိုအဆငျ့ ဖွဈခွငျး၊ အသကျရှူမဝခွငျး၊ သှေးတှငျးအဆီမြားခွငျးနှငျ့ လေးဖကျနာဝဒေနာတို့ ခံစားခဲ့ရသျောလညျး ယခု ကိုယျအလေးခြိနျ ပေါငျ ၅၀ ကပြွီးနောကျပိုငျးတှငျ ထိုဝဒေနာမြား သိသာစှာ လြော့ပါးသကျသာသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မလိုအပျတဲ့ အပိုဝနျ ပေါငျ ၅၀ လောကျ လြော့သှားတဲ့အခါ လူကလညျးပေါ့ပါးသှားတယျ။ အရငျကဆို ကွာကွာ တောငျမတျတတျမရပျနိုငျဘူး။ လမျးလြှောကျရမှာကို ကွောကျနခေဲ့တာ။ အခုကတြော့ လမျးလြှောကျရတာကို အားကစားတဈခုလို မဟုတျဘဲ ကောငျးကြိုးရှိတယျဆိုတဲ့ အသိနဲ့ လြှောကျကိုလြှောကျခငျြနတော. . .
“မလိုအပျတဲ့ အပိုဝနျ ပေါငျ ၅၀ လောကျလြော့သှားတဲ့အခါ လူကလညျး ပေါ့ပါးသှားတယျ။ အရငျကဆို ကွာကွာတောငျ မတျတတျမရပျနိုငျဘူး။ လမျးလြှောကျရမှာကို ကွောကျနခေဲ့တာ။ အခုကတြော့ လမျးလြှောကျရတာကို အားကစားတဈခုလို မဟုတျဘဲ ကောငျးကြိုးရှိတယျဆိုတဲ့အသိနဲ့ လြှောကျကို လြှောကျခငျြနတော။ အခုနောကျပိုငျးကတြော့ ရောဂါမဖွဈအောငျ ကာကှယျဖို့ ဝိတျလြှော့ရမယျဆိုတဲ့ အသိရှိသှားခဲ့ပါတယျ”ဟု ဦးမွတျသူကဆိုသညျ။
“ဆရာမက လကေ့ငျြ့ခနျးကို စိတျပြျောလာအောငျ အရငျလုပျဆိုပွီး တဈရကျကို တဈနာရီခှဲပဲ လမျးလြှောကျခိုငျးပါတယျ။ အဲဒါတောငျ ဆကျတိုကျ မလြှောကျခိုငျးပါဘူး။ ၁၅ မိနဈလြှောကျပွီး နား၊ ပွီးမှ ၁၅ မိနဈလြှောကျ . . တဈနကေုနျမှာ တဈနာရီခှဲပွညျ့ရငျ တျောပွီလို့ ပွောခဲ့တယျ။ စစခငျြးတုနျးက တဈနာရီခှဲ ပွညျ့အောငျ လြှောကျနိုငျဖို့ တျောတျောအား ထုတျခဲ့ရတယျ။ အခုကတြော့ တဈနကေို့ နှဈနာရီခှဲတောငျ လမျးလြှောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ရလေညျး ကူးပါတယျ။ အရငျက လမျးလြှောကျရငျတောငျ အိပျခငျြ မူးတူးလြှောကျခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ လကျတှလှေဲယမျးပွီး တကျတကျကွှကွှနဲ့ ခြှေးထှကျတဲ့အထိ လြှောကျပါတယျ။ ဒီလိုလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျရငျ နရေတာ လနျးဆနျးတယျ၊ နာတဲ့ဒဏျလညျး မခံစားရတော့ပါဘူး”ဟု ဦးမွတျသူက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးကွောငျ့ ရရှိသညျ့ ကောငျးကြိုးကို မြှဝခေဲ့သညျ။
ဦးမွတျသူဝိတျလြှော့နိုငျခဲ့ခွငျး၏ အဓိက တှနျးအားမှာ ဇနီးသညျ၏ အားပေးမှုဟု သူကဆိုသညျ။
“အဓိက ဝိတျခဖြွဈတဲ့ တှနျးအား ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးက ကြှနျတေျာ့ အမြိုးသမီးကွောငျ့ပါပဲ။ သူက ကြှနျတေျာ့ကို အသကျရှညျကနျြးမာစခေငျြတယျ၊ လှလညျး လှစခေငျြတယျ။ ဝတဲ့အခါ ဘယျအဝတျအစားနဲ့မှ မတျောတော့ဘူး။ အဆငျဘယျလောကျလှလှ ဝတျလို့မရတော့ဘဲ တျောတာဝယျဝတျရတဲ့ဘ၀ ဖွဈသှားခဲ့တယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဂေါ့ဖျရိုကျရငျတောငျ သူမြားတှလေို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မသှားလာနိုငျတဲ့ ဘဝမြိုးဖွဈပွီး ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးမှာပါ နောကျမှာ ကနျြခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသမီးက အစားအသောကျတှကေို ဆရာမရဲ့ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး ပွငျဆငျပေးတယျ။ ဟငျးရညျဆိုလညျး မထပျအောငျ စားခငျြစဖှယျ ပွငျဆငျပေးတယျ။
ကိုယျ့လို ကနျြးမာရေးအသိမရှိတာမြိုး မဖွဈအောငျ သားကိုလညျး ဆရာမဆီ ချေါသှားတိုငျး ကနျြးမာရေးအသိရှိလာအောငျ သငျပေးထားတယျ။ အဲဒီအတှကျ သားကလညျး အသီးအရှကျတှေ စားတတျတဲ့အကငျြ့ရလာပါပွီ”ဟု ဦးမွတျသူကပွောသညျ။ အရပျ ၅ ပေ ၇ လကျမရှိသော ဦးမွတျသူအတှကျရှိသငျ့သညျ့ ပုံမှနျကိုယျအလေးခြိနျသညျ ၁၄၀ ပေါငျပတျဝနျးကငျြဖွဈသျောလညျး နောငျ ၆ လအတှငျး ၁၉၀-၂၀၀ ပေါငျကွားရှိသညျအထိ လြှော့ခသြှားမညျဟု ဆုံးဖွတျထားပွီး ပေါငျ ၂၀၀ မကြျောအောငျ အမွဲထိနျးထားမညျဟု ဦးမွတျသူကဆိုသညျ။
အဝလှနျခွငျး၊ ဝခွငျးတို့ကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခလြိုသူမြားအတှကျ –
“အသကျလညျးရှညျခငျြတယျ၊ ကနျြးကနျြးမာမာလညျး နခေငျြတယျ၊ စတိုငျကပြွီး စမတျလညျး ကခြငျြတယျဆိုရငျတော့ ဝနတောက ဘယျဘကျကကွညျ့ကွညျ့ မကောငျးပါဘူး။ မိသားစုဘကျက ကွညျ့လညျး မကောငျးဘူး။ လူမှုရေးဘကျကကွညျ့လညျး မကောငျးဘူး၊ စီးပှားရေးဘကျကကွညျ့လညျး မကောငျးဘူး။ ကနျြးမာရေးမကောငျးရငျ ကိုယျတဈယောကျတညျး ထိခိုကျတာမဟုတျပါဘူး၊ မိသားစုမှာလညျး ထိခိုကျသလို စီးပှားရေး၊ လူမှုဆကျဆံပေါငျးသငျးရေးမှာလညျး ထိခိုကျပါတယျ။ အဘကျဘကျမှာ ဆုံးရှုံးပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အဝလှနျသူတှကေော ဝတဲ့သူတှပေါ ကနျြးမာရေးနဲ့အညီ နထေိုငျစားသောကျပွီး ဝိတျလြှော့သငျ့တယျလို့ ထငျပါတယျ။
ဒီအဝလှနျတာကွောငျ့ ရှဈလ-ကိုးလလောကျ အိပျရာထဲက မထနိုငျလောကျအောငျ နာဖူးခဲ့ပွီးပွီ။ အခု ပေါငျ ၅၀ လောကျ ကပြွီးခြိနျမှာ ကနျြးမာရေးကလညျး ပုံမှနျကောငျးလာတယျ၊ မိသားစုကလညျး ပြျောရှငျမှုရလာတယျ၊ စီးပှားရေးမှာလညျး လုပျနိုငျကိုငျနိုငျတဲ့ စိတျစှမျးအား ရှိလာတယျ၊ အဲဒီအတှကျ ဘယျလို ဖိအားဒဏျတှပေဲလာလာ ခံနိုငျရညျ ပိုရှိလာပါတယျ။ အစစအရာရာ ပိုမို အဆငျပွလောတာကိုတော့ ကြှနျတျောရဲ့ ကိုယျတှပေ့ါပဲ။
တဈလ ဝိတျလြှော့ဖို့ နောကျကရြငျ ၁၀ ပေါငျ ကရြမယျ့အစား မဆငျခွငျဘဲနလေို့ ၁၀ ပေါငျ ထပျတကျလာတဲ့အတှကျ ပေါငျ ၂၀ နဈနာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခကျြခငျြးပဲဝိတျလြှော့ပါလို့ စတေနာနဲ့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ”ဟု ဦးမွတျသူက အကွံပေးစကား ပွောကွားလိုကျပါသညျ။
Credit – ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)
« ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို သစ္စာဖောက်တာလဲ » လေမှာ လေပြင်းကြောင့် တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်းရဲ့ ဇာတ်ပွဲရုံပျက်စီး